maqifka bulshawaynta gadabuursi ee ka soo jeeda dagaanka djibouti oo iyagu markale eedaynaya magacabista gobolka salal | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
maqifka bulshawaynta gadabuursi ee ka soo jeeda dagaanka djibouti oo iyagu markale eedaynaya magacabista gobolka salal
Aqoonyahanno iyo hogaamiye dhaqameedyo kasoo jeeda degaanka Gadaboursika ee Jibouti ayaa diidmo ka muujiyey dhawaanta gobolka lagaga dhawaaqay somaliland , isla markaana sheegay in magacaabistii Gobolka ” Salal: “Annagoo ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahannada Beesha Samaroon ee Reer Jibuuti, annagoo ka tarjumayna dareenka qaybo badan oo ka tirsan isla beesha ee dalka gudihiisa ee Gadabuursika, hase yeeshee magacabista Gobolka way ka duwanayd arrimaha dhaqanka iyo siyaasada ah maadaama qaybo ka mid beeshuna aanay raalli ka ahayn magacaabistaasi Salal district.
Magacaabistaasina ay abaabuleen shakhsiyaad ka mid ah Beesha Issa ee fadhigoodu yahay Hargeysa , Jibouti kuwaasoo doonayey una adeego danahooda.
Isla markaana arrimahasi oo keeneen khilaaf suurtagashay ” Awdal state”. Gaar ahaan hadii hoos u daadego dadka reer Djibouti * Gadabousiga * waxay awdal state ugu farxen farxad aan la qiyaasi karin.
Waxaan talo ka u soo jeedinaynaa waxgaradka beesha Gadabuursii . Waxaa soo ifbaxaya warar sheegayaa in Gadabuursi uusan u diyaar aheyn midnimo guud ee somaliland. Somaliland waxay noqoday tusbax kala furtay oo ay aad u hawl badan tahay sida dib la isku xidhi laxa.
Shirkii dhawaan lagaga hadlaayey arrimaha Gadabuursika ee UK lONDON , Gadabuursi waxay iska taageen mowqif isku mid ah oo ah ” Awdal state”. Gadabuursi warkoodu wuu cad yahay.
Waxa la wada ogyahay in deegaanka ( lughaya, zaylac, boon, borama ila iyo gebiley ) iin bulshada Gadabuursigu ay lahaayeen taariikh soo-jireen ah oo ku suntan ” Adal empire” . Waxa aan shaki ku jirin in nidaamkaa dawladnimo ee kala dambeynta ku dhisnaa laga dhaxlay horumar dhamaystiran oo cid walba qaddariso ilaa dawladda Ingiriisku aqoonsi ahaan u tilmaantay “Dhulkii Gadabuursiga”(Gadabuursi Territory).Sidaa awgeed isbadalka dhaqan-dhaqaale ee ku yimid bulshada Gadabuursi iyo deegaankiisaba waxa sababtiisa ugu weyn lahaa iyaga oo albaabka u furay cid kasta oo fursad u la’ayd fur-furka nidaamkaa Gadabuursi.
Cidii fikirkayga mid ka duwan qabta iyo cidii igu waafaqsaniba ha iigu soo hagaajiyaan website:
Afhayeeka Reer Jibouti
Mahamoud Ali youssouf.
« halkan ka daawo caalmo ururinta iyo ducada iyo heesaha dhirigalinta ah ee ka socda tv daka tukriga ee ay ugu ololaynayaan caawimaad loogu deeqo walaalahooda muslimka ah ee somaliya ee col iyo abaari baabisay daawo video nala daawada nin ka hadlaaya odayada qurba jooga ah iyo hablaha wadankii jooga waxa kala haysta video »